तेस्रो आँखा विशेष – Page 10 – Tesro Ankha
दीपेन्द्र राई आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचनमा सहभागी सम्बन्धित दलसम्बद्ध नेता भोट माग्न गाउँगाउँ पुगेका छन् । पुग्दै छन् । आफ्ना प्रतिबद्धतासहित भोट माग्न गाउँगाउँ पुग्नेको ‘क्याराभान’ देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध नेतालाई निर्वाचन कुम्भमेलामात्रै होइन, अग्निपरीक्षा पनि हो भन्दा अन्यथा नहोला । निर्वाचनको प्रसंग आउनासाथ सोलुखुम्बुको गुदेल माध्यमिक विद्यालयमा...
खासमा उनी कान्छा छोरा होइनन् । र, सही नाम कान्छा पनि होइन । तर, सबैले उनलाई कान्छा शेर्पा भनेर बोलाउँछन् । चिन्छन् पनि । नेपालमात्र होइन, विश्वमै उनी कान्छा शेर्पा भनेर कहलिएका छन् । कान्छा शेर्पाका अनुसार उनी परिवारको माइलो छोरा हुन् । खासमा उनको नाम आङदोर्जे शेर्पा हो । तर, आमाले सानामा माया गरेर कान्छा भनेका कारण उनी अहिले संसारभरि कान्छा नामले चिनिएका छन । नाम्चेबजारमा जन्मेका कान्छा कीर्...
दीपेन्द्र राई ‘गोरखा भूकम्प जाँदा परिवारसहित काठमाडौंमा थिएँ,’ २१ वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएकी मौसमी श्रेष्ठले सुनाइन्, ‘२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प जाँदा घरको चौथो तलामा थिएँ । दुई दिनसम्म भागाभाग भयो । म त बाँचेर अमेरिका फर्कें । तर, नेपालमा नेपाली के गर्दै होलान् ? यस्तै–यस्तै सोचेर कैयौं रात निदाउन सकिनँ ।’ भूकम्प गएको पहिलो र दोस्रो दिन सडकमै रात का...
सुन्दर साल्तेम्मा (फोटो फिचर)
साल्तेम्मा हलेसी–तुवाचुङ नगरपालिका–५ खोटाङमा पर्छ । तात्कालिक दुर्छिम गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ मा पर्ने साल्तेम्मा नामकरणबारे दुई किंवदन्ती प्रचलित छन् । पहिलो किंवदन्तीअनुसार, परापूर्वकालमा साल्तेम्माको सिरानमा रहेको चन्डीडाँडासँगै सम्म परेको जमिन पृथ्वी हलचलका कारण केही भाग सड्केर तल झरेको थियो । जसलाई चाम्लिङ राई भाषामा ‘साटा ढा’ भनिन्छ । ‘साटा ढा’ बाटै साल्तेम्मा भएको बताइन्छ । ...
एक धार्नी आलु बेच्दा ५ पैसा विकास कर
विनोदविक्रम केसी बुद्ध थाहा पाएर बुद्ध बने क्राइष्ट थाहा पाएर क्राइष्ट बने संसारका सब मानिस थाहाका उपज हुन् सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे बिग्रेका देश भ्रम परेर बिग्रे भ्रमैभ्रममा बा“चेर बिग्रको यो देशको एउटा नागरिक तपाईं थाहा पाउनूस् देश सप्रिन थालिहाल्छ संवत् २०२९/०३० तिर जनमुखी नेता रूपचन्द्र विष्टले थाहा आन्दोलन सुरु गरे । रूपचन्द्र र उनका सहकर्मीका हातबाट चट्टान, भित्ता, पर्खा...
जेबी विश्वकर्मा अमेरिका, युरोपलगायत थुप्रै विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापक पनि अध्यापनमा संलग्न छन् । विश्वमै ख्याति कमाएका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली प्राध्यापकमध्ये थोरैमात्र नेपालको विकास, समृद्धि, विकास तथा उन्नतिका विषयमा चिन्तित छन् । अझ नेपालका सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र प्रा...
पटकपटक मन्त्री भइसकेका गोपाल किराती एकताका ट्रेकिङ मजदुरी गर्थे । पूर्वमन्त्री किरातीले तीन वर्षमा १२ पटक थोरङ पास गरे । उनी भरियादेखि स्पेयर ब्वाई हुँदै शेर्पा गाइडसम्म बने । भरिया र स्पेयर ब्याईभन्दा शेर्पा गाइड ठूलो पद हो । शेर्पा गाइडले अंग्रेजी भाषा जान्नैपथ्र्यो । पूर्वमन्त्री गोपाली किरातीसँग कुराकानी गरी दीपेन्द्र राईले तयार पारेको स्टोरी । संवत् २०४० कात्तिकदेखि...
तुलसीदास महर्जन हिजोआज ४० काटेका सहरिया मानिसलाई उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य रोगले समात्नु सामान्य भइसकेको छ । उल्लिखित रोगबारे समयमै सही ज्ञान प्राप्त गरी निरन्तर निगरानी गरिराख्न क्लिनिक तथा अस्पताल धाइरहनुपर्ने भएकाले धेरैलाई झन्झटमात्रै होइन दिक्कलाग्दो बनाएको छ । उच्च रक्तचापपीडितले मदिरा खान हुँदैन भने दौडनु पनि भएन । चिन्ता लिनु भनेको उच्च रक्तचाप बढाउनु हो । सर्वप्रथम रक्तचाप क...
दीपेन्द्र राई कोठा सर्दै हुनुहुन्छ ? आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा कोठा सर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुभएको छ कि ? पायक पर्ने ठाउँमा सर्न तपाईंले कोठा खोजेको कति भयो ? जागिरभन्दा कोठा पाउन गाह्रो काठमाडौंमा तपाईं यी झन्झटबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने रातोपुल (काठमाडौं) जानूस् । तपाईंको समस्या सजिलै समाधान हुनेछ । तर, केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई कतिवटा कोठा चाहिएको हो ? कु...
प्रिय तिमी जून बन्न सक्दिनौ, चन्द्रमामा बुसले आची गरिसकेका छन्
दीपेन्द्र राई प्रिय तिमी जून बन्न सक्दिनौ, किनकि चन्द्रमामा बुसले आची गरिसकेको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको आरआर क्याम्पसमा अध्यापनक्रममा अध्यापक विनोद मञ्जनले उल्लिखित अभिव्यक्ति सुनाएका थिए । यस्तै चोटिला अभिव्यक्तिसहितको सिर्जना पूर्वी पहाडको गाउँगाउँमा पाइने बाँसमा खोपिएका हुन्छन् । पंक्तिकार रिपोर्टिङक्रममा सोलुखुम्बु पुगेका थिए । स्थानीय सिर्जनशीलले आफूले लेखेको सिर्जन...